ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်နေရပြီ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဗြိတိန် ဝန်ကြ...
27 มี.ค. 2563 - 20:18 น.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရလို့ သီးခြား ခွဲနေထိုင်လျက် ရှိတယ်လို့ ဘောရစ်ပြော
ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း ဗြိတိန် အစိုးရ က ပြောပါတယ်။
အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ဌာန NHS က ၀န်ထမ်းတွေက ဝန်ကြီးချုပ် နေအိမ်မှာ လာရောက် စစ်ဆေးပေးခဲ့ပြီးနောက် အခုအခါ သူဟာ ဒေါင်းနင်းလမ်း နေအိမ်မှာ သီးခြား ခွဲနေထိုင်ကာ သူ့ဆီမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ လက္ခဏာ အနည်းငယ်သာ တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်္ဂလန် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ထိပ်တန်း အရာရှိ ပါမောက္ခ ခရစ်စ် ဝစ်တီ ရဲ့ အကြံပေးချက် အရ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ သူ့မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိတာ ဖြစ်ပြီး အခုတော့ သူဟာ အစိုးရ အဖွဲ့နဲ့ အတူ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ပေးလျက် ရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ကူးစက်မှုတွေ ဘယ်တော့ ရပ်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေ ပြောလဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီ အတွင်း ရောဂါ လက္ခဏာ အနည်းငယ်ပြလို့ စမ်းသပ် စစ်ဆေး ကြည့်တဲ့ အခါ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံထားရတယ် ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ် ၊ အခုတော့ တယောက်တည်း သီးခြား ခွဲနေထိုင်လျက် ရှိပေမယ့် ဗီဒီယို ကွန်ဖရန့် ကတဆင့် အစိုးရ အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ကာ ဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင်လျက် ရှိတယ်လို့ မစ္စတာ ဂျွန်ဆင်က သူ့ရဲ့ တွတ်တာ စာမျက်နှာကနေ သတင်းစကား ပါးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အတူတကွ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြရင် အောင်မြင်မှာပါလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်အပူချိန် ပုံမှန်ထက်မြင့်ကာ ဆက်တိုက် ချောင်းဆိုး တာဘဲ ရှိတယ်လို့ မစ္စတာ ဂျွန်ဆင်က တွတ်တာ လူမှုကွန်ယက် ပေါ်ကနေ ပြောကြား ထားပါတယ်။
မတ်လ ၂၆ရက်နေ့ ညတုန်းကတော့ NHS ၀န်ထမ်းတွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ မစ္စတာ ဂျွန်ဆင်ဟာ သူနေထိုင်ရာ အမှတ် ၁၀ ဝန်ကြီးချုပ် နေအိမ်အပြင်ထွက်ကာ လက်ခုပ်တီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေကို လက်ခုပ်တီး ဂုဏ်ပြုခဲ့အပြီး ဘောရစ်ကို မြင်တွေ့ရစဉ်
ယူကေမှာ အခုအခါ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူ ၁၁၆၀၀ ကျော် ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၅၇၈ ယောက် ရှိပါတယ်။
အခု သီတင်းပတ် အစောပိုင်းတုန်းကလည်း ဗြိတိသျှ အိမ်ရှေ့စံ ချားလ်စ် မင်းသား ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံထားရတယ်လို့ နန်းတော်က ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
အသက် ၇၁ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဝေလမင်းသား ချားလ်စ် ဆီမှာ ရောဂါ လက္ခဏာ အနည်းငယ် တွေ့ရတာကလွဲလို့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက် ရှိတယ်လို့ နန်းတွင်း အရေး ဆိုင်ရာ ပြောခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်နေရပြီ